किन मेरो आईफोन डिमिंग राख्दछ? यहाँ सत्य छ! - आईफोन
imessage वाईफाई मा काम गर्दैन
चरा विन्डो अन्धविश्वास मा उड्यो
ब्लक घोटाला सम्भवतः टी मोबाइल कल
आईफोन on मा डाउनलोड नहुने एपहरु
आईप्याड मिनी इन्टरनेटमा जडान गर्दैन
तपाईंको आईफोन डिस्प्ले मधुरो हुँदै जान्छ र किन त्यो तपाईंलाई थाहा छैन। जब तपाईं स्क्रिनको चमक माथि बदल्नुहुन्छ, तपाईंको आईफोन फेरि मधुरो हुन्छ। यस लेखमा, म गर्नेछु तपाइँको आईफोन किन मधुरो रहन्छ र कसरी राम्रोको लागि समस्या समाधान गर्ने तपाइँलाई देखाउनुहोस् भनेर वर्णन गर्नुहोस् !
किन तपाईको आईफोन डिमिंग राख्छ
धेरै जसो समय तपाईको आईफोन डिमिंग रहन्छ किनकि स्वत: ब्राइटनेस अन गरिएको छ। स्वत: ब्राइटनेस एक यस्तो सुविधा हो जुन तपाईको आईफोन स्क्रिनको उज्यालोपना स्वचालित रूपमा वरपरको प्रकाश अवस्थाहरूमा निर्भर गर्दछ।
राती जब यो अँध्यारो हुन्छ, स्वत: उज्यालोपनाले तपाईंको आईफोन डिस्प्ले अँध्यारो बनाउँदछ त्यसैले तपाईंको स्क्रीन तपाईंको आँखाले नदेख्न सक्छ जुन तपाईंले स्क्रीनमा हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईं एक चम्किलो र घमाइलो दिनमा समुद्री किनारमा बाहिर हुनुहुन्छ भने, अटो-ब्राइटनेसले प्रायः तपाईंको आईफोन डिस्प्लेलाई यथासम्भव उज्यालो बनाउँदछ ताकि तपाईं वास्तवमा स्क्रीनमा के हुँदैछ हेर्न सक्नुहुन्छ!
यदि तपाईको आईफोन मधुरो हुँदै गयो र तपाईले रोक्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले अटो-ब्राइटनेस बन्द गर्नुपर्नेछ। खोल्नुहोस् सेटिंग्स र ट्याप गर्नुहोस् पहुँच -> प्रदर्शन र पाठ आकार । त्यसो भए पछि स्वीच बन्द गर्नुहोस् स्वत: चमक ।
आईओएस १० मा कसरी विशेष सन्देश पठाउने
एप्पलले नोट गरे कि स्वत: चमक बन्द गर्दा तपाईंको आईफोनको ब्याट्री जीवनलाई असर गर्न सक्छ। अनिवार्य रूपमा, यदि तपाईंले आफ्नो iPhone सबै दिन अधिकतम चमकमा छोड्नुभयो भने, यसले ब्याट्री द्रुत रूपमा खत्तम पार्छ यदि तपाईंले आफ्नो आईफोन सारा दिन न्यूनतम चमकमा छोड्नुभयो भने। थप जान्नको लागि हाम्रो अन्य लेख जाँच गर्नुहोस् आईफोन ब्याट्री सल्लाह यसले यसको ब्याट्री जीवन विस्तार गर्न अझ धेरै काम गर्दछ!
के नाईट शिफ्ट अन गरिएको छ?
अर्को सामान्य कारण यो किन तपाईको आईफोन डिमिंग रहन्छ जस्तो लाग्न सक्छ रातको शिफ्ट अन गरिएको छ। नाइट शिफ्ट यस्तो सुविधा हो जुन तपाईंको आईफोन डिस्प्ले तातो बनाउँदछ, जसले तपाईंको आईफोन प्रयोग गरे पछि राती सुत्न सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ।
जाऊ त्यहाँ सेटिंग्स -> प्रदर्शन र चमक र ट्याप गर्नुहोस् नाईट शिफ्ट । तपाईं अर्को नाइट शिफ्टमा छ यदि स्विच अर्को छेउमा छ म्यानुअल भोली सम्म सक्षम गरिएको खोलिएको छ। नाइट शिफ्ट बन्द गर्न स्विचमा ट्याप गर्नुहोस्।
स्पेनिश मा कस्मेटोलोजी स्कूल
यदि तपाईंले आफ्नो आईफोनमा नाइट शिफ्ट निर्धारित गर्नु भएको छ भने, यो सुविधा स्वचालित रूपमा तोकिएको समयावधिमा चालू हुन्छ। तपाई पछाडि स्विच बन्द गर्न सक्नुहुन्छ अनुसूचित रातको शिफ्टलाई दिनको केही घण्टामा स्वचालित रूपमा चालू गर्नबाट रोक्नको लागि।
सपनामा कालो विधवा मकई को अर्थ
कन्ट्रोल सेन्टरबाट नाइट शिफ्ट पनि टगल वा बन्द गर्न सकिन्छ यदि तपाईंको आईफोन आईओएस ११ वा १२ मा अपडेट गरिएको छ भने कन्ट्रोल सेन्टर खोल्नका लागि आईफोन एक्स वा नयाँमा स्क्रीनको माथिल्लो दायाँ कुनाबाट स्वाइप गर्नुहोस्, वा स्वाइप अप गर्नुहोस्। 8 वा सो भन्दा पुरानो आईफोनमा स्क्रीनको तलबाट।
अर्को, थिच्नुहोस् र चमक स्लाइडर होल्ड गर्नुहोस्। त्यसो भए, टगल बन्द गर्न वा खोल्नको लागि नाइट शिफ्ट बटनमा ट्याप गर्नुहोस्।
मेरो आईफोन अझै डिमिंग हुँदैछ!
यद्यपि यो असम्भव छ, तपाईंको आईफोन अझै उज्यालो हुन सक्छ स्वत: ब्राइटनेस र नाइट शिफ्ट बन्द भए पछि। सफ्टवेयर समस्या वा एउटा हार्डवेयर समस्या तपाईंको आईफोन डिमिंग राख्नुको कारण हुन सक्छ।
तलका चरणहरूले तपाईंलाई केही आधारभूत सफ्टवेयर समस्या निवारण चरणहरू पार गर्नेछन् र मद्दत विकल्प फेला पार्न मद्दत गर्दछ यदि तपाईंको आईफोन बिग्रिएको छ!
तपाईको आईफोन पुनःस्टार्ट गर्नु सामान्य सफ्टवेयर समस्याहरूको लागि सामान्य फिक्स हो जुन डिस्प्ले डिम्म गर्न सक्दछ। तपाइँको कुन मोडलमा निर्भर छन् तपाइँको आईफोन पुनःस्टार्ट गर्ने तरिका यहाँ छ:
आईफोन 8 र अघिल्लो : थिच्नुहोस् र 'स्लाइड टु पावर अफ' देखा पर्दासम्म पावर बटन होल्ड गर्नुहोस्। रातो रातो आईकन बायाँ देखि दायाँ स्वाइप गर्नुहोस् तपाईंको आईफोन बन्द गर्न। तपाईंको आईफोनलाई फेरि खोल्नको लागि, एप्पल लोगो स्क्रिनको बीचमा देखा पर्दा सम्म फेरि पावर बटन थिच्नुहोस् र होल्ड गर्नुहोस्।
आईफोन एक्स र अझ नयाँ : एकै साथ थिच्नुहोस् र साइड बटन र या त भोल्यूम बटन होल्ड गर्नुहोस् जब सम्म 'स्लाइड टु पावर अफ' प्रदर्शनमा देखा पर्दछ। त्यसो भए, रातो पावर आइकनलाई बायाँ देखि दायाँ 'स्लाइड टु पावर अफ' मा स्वाइप गर्नुहोस्। केहि क्षण प्रतिक्षा गर्नुहोस्, त्यसपछि थिच्नुहोस् र साइड बटन फेरि होल्ड गर्नुहोस् तपाईको आईफोन एक्स वा नयाँ फिर्ता खोल्नको लागि।
एप्पल नियमित रूपमा नयाँ आईफोन सुविधाहरू प्रस्तुत गर्न र समस्याग्रस्त बगहरू र त्रुटिहरू ठीक गर्न सफ्टवेयर अपडेटहरू जारी गर्दछ। खोल्नुहोस् सेटिंग्स फेरि ट्याप गर्नुहोस् सामान्य -> ​​सफ्टवेयर अपडेट । ट्याप गर्नुहोस् डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस् यदि सफ्टवेयर अपडेट उपलब्ध छ भने।
अपडेट पूर्ण भएपछि फिर्ता जानुहोस् सेटिंग्स -> पहुँच -> प्रदर्शन र पाठ आकार र निश्चित गर्नुहोस् स्वत: चमक बन्द छ। कहिलेकाँही यो सुविधा iOS अपडेट पछि पछाडि फर्कन्छ!
चार्ज यो सहायक आइपड टच संग समर्थित छैन
तपाईंको आईफोनलाई ब्याक अप गर्नुहोस्
कुनै पनि अगाडि जानु अघि, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो आईफोनको जगेडा सुरक्षित गर्नुभयो। हाम्रो अर्को चरण एक DFU पुनर्स्थापना हो, त्यसैले तपाईं जगेडा राख्न चाहानुहुन्छ त्यसैले तपाईं आफ्नो डाटा वा व्यक्तिगत जानकारी हराउनुहुन्न।
बिजुलीको केबल प्रयोग गरेर तपाईंको कम्प्युटरमा तपाईंको आईफोन प्लग गर्नुहोस् र आईट्यून्स खोल्नुहोस्। त्यसो भए, आईट्यून्सको माथिको बाँया कुनामा नजिक फोन फोन क्लिक गर्नुहोस्। अन्त्यमा, क्लिक गर्नुहोस् आहिले संचित गर आईफोन ब्याकअप सिर्जना गर्न।
आईट्यून्स मेरो आईफोन भेट्टाउने छैन
यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने हाम्रो YouTube भिडियो जाँच गर्नुहोस् तपाईको आईफोन क्लाउडमा आईफोन गर्नुहोस् ITunes को सट्टामा!
DFU रिस्टोर आईफोन रिस्टोरको सबैभन्दा गहिरा प्रकार हो। तपाईको आईफोनमा सबै कोडहरू मेटाउनेछन् र पुन: लोड हुन्छन् जब तपाईं यसलाई DFU मोडमा राख्नुहुन्छ र पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। जान्नको लागि हाम्रो पूर्ण गाईड जाँच गर्नुहोस् कसरी तपाइँको आईफोन लाई DFU मोडमा राख्ने !
आईफोन मर्मत विकल्प
यद्यपि यो धेरै असम्भव छ, तपाईंको आईफोन डिस्प्लेको साथ एक हार्डवेयर समस्याको कारण मधुरो हुन सक्छ। अपोइन्टमेन्ट सेट अप गर्नुहोस् र तपाइँको आईफोनलाई तपाइँको स्थानीय एप्पल स्टोरमा लैजानुहोस्, विशेष गरी यदि तपाइँसँग एप्पलकेयर छ। एक जीनियसले क्षतिको आकलन गर्न सक्षम हुनेछ र यदि तपाईंलाई मर्मत आवश्यक छ भने तपाईंलाई सूचित गर्नुहोस्।
हामी पनि सिफारिस गर्दछौं नाडी , एक माग गरिएको मर्मत कम्पनी जसले एक प्रमाणित टेक्नीशियन पठाउन सक्दछ कि तपाईंलाई si० मिनेट जति भन्दा कममा!
उज्यालो र Breezy
तपाईंले आफ्नो मधुरो आईफोन फिक्स गर्नुभयो र प्रदर्शन फेरि सामान्य देखिन्छ! अर्को पटक तपाईको आईफोन डिमिंग रहन्छ, तपाईलाई समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनेर ठीकसँग थाहा हुन्छ। तपाइँको आईफोनको प्रदर्शनको बारेमा कुनै पनि अन्य प्रश्नहरू तल टिप्पणी सेक्सनमा तल छोड्नुहोस्।